Ahoana no fomba fiatrehana ny algorafery?
Ny olana amin'ny algebra dia tena ilaina amin'ny famahana ny olan'ny fiainana tena izy. Azonao atao izany. Tsarovy ireo teny malaza nataon'i Albert Einstein
"Aza manahy ny fahasarotanao amin'ny matematika, manome toky anao aho fa lehibe kokoa ny ahy."
Rehefa mandray ny toe-draharaha misy anao ianao ary handika izany amin'ny matematika, dia 'maneho' azy ianao izao; noho izany ny fehezanteny matematik 'expression'. Ny sisa tavela amin'ny famantarana mitovy dia heverina ho zavatra iray maneho anao.
Ny zavatra rehetra eo ankavanan'ny famantarana mitovy (na tsy fitoviana) dia fomba iray hafa. Raha lazaina tsotra, ny fiteny iray dia endrika maromaro, litera ary asa. Ny tarehimarika dia manana tarehimarika. Indraindray ny fifandirana dia manakorontana amin'ny teny . Mba hitazonana ireo teny roa ireo dia manontania tena raha afaka mamaly amin'ny marina / diso ianao. Raha izany no izy, dia manana fombam-pitenenana ianao, fa tsy fanehoan-kevitra izay mety amin'ny tarehimarika. Rehefa manatsara ny fitoviana, dia matetika ny iray dia mamoaka expression toy ny 7-7 izay mitovy 0.
Word Expression Algebraic Expression
10 isa x
Ny olana amin'ny teny dia misy sazy. Ilainao ny mamaky ilay olana amin'ny alàlany amim-pitandremana mba hahazoana antoka fa azonao ny fahatakarana ny fangatahanao hamaha. Diniho tsara ny olana momba ny famaritana ireo fanalahidy fototra. Mifantoha amin'ny fanontaniana farany amin'ny teny hoe olana.
Vakio indray ilay olana mba hahazoana antoka fa takatrao ny zavatra nangatahinao. Avy eo, esory ny fanehoan-kevitra.
1. Tamin'ny valin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako dia nandanjalanja 125 pounds aho. Herintaona taty aoriana aho dia nametraka pdf. Iza amin'ireto lanjako ireto no herintaona taty aoriana?
Raha ampitomboina ny isa misy ny isa n amin'ny 6 ary avy eo dia ampidirina 3 amin'ny vokatra, ny isa dia mitovy amin'ny 57. Ny iray amin'ireo teny mitovy mitovy amin'ny 57, iza moa izany?
Ny valiny ho an'ny 1 dia a) x 125
Valiny ho an'ny 2 dia d) 6 n 2 3
Amin'ny tenanao manokana:
Ny vidin'ny radio vaovao dia p dolara. Ny radio dia mivarotra 30%. Inona avy no teny fanononanao izay hilaza ny tahiry izay atolotra amin'ny radio?
Ny namanao Doug dia nanome anao ity fomba fitenenana manaraka ity: "Alaharo in-15 isa ny isa n avy amin'ny avo roa heny ny isa. Inona ny fanehoan-kevitry ny namanao?
Jane sy ny namany telo ao amin'ny oniversite dia handeha hizara ny saran'ny efitrano 3 efitrano. Ny sandan'ny fanofana dia vola dolara. Inona ny fanehoan-kevitra azonao anoratana izay hanambara aminao ny anjaran'i Jane?
Ny fahazoana mahazatra ny fampiasana ny teny algebra dia fahaizana manan-danja iray ho an'ny fianarana Algebra!
Jereo ny lisitr'ireo apps indrindra ho an'ny fianarana alemaina.
Ampiasao ny fomba fanovàna eo amin'ny rafitra fitoviana
Asehoy ny takelaka fampiasana foitra
Inona no tokony ho fantatrao mikasika ny nomerao nomerao
Famaritana ny Monomials amin'ny Algebra fototra
Algebra olana ara-baiboly: Fanontaniana ho an'ny taona
Zoma Vavaka amin'ny finoana silamo
Atsipazo sy mandoro ny fambolena
Ny dikan'ny frantsay expression L'Esprit D'Escalier
Iza no tsy nahazo aina?
Inona no atao hoe Qilin?
Febroary: fotoana fanadiovana
Ny fiadiana sy ny fanaovan-tserasera nampiasan'ny mpampihorohoro
Ireo Hadesy Grika Andriamanitra, Tompon'ny Tsitoha
Ny fomba hamelana ny kolokoloinao hahalala anao tahaka azy ireo
Ponce de Leon sy ny Loharanon'ny Tanora
Ahoana no Ataovy Isika Manodidina ny Rice eo amin'ny sary
Glossary of Basic Visual Terms
Tokony hiaraka amin'ny Fraternity / Sorority ve aho?
Manazava ny "Stimp" na ny "Stimp Rating"
Torohevitra ho an'ny hosodoko amin'ny ranom-boankazo
Izay azonao andrasana handoavana ny Lalao Paintball
Manipulate Web Forms amin'ny TWebBrowser
Manana tombony ny vatanao sy ny eritreritrao
Fahatsiarovana mafana indrindra avy amin'ny adihevitra momba ny fifidianana filoham-pirenena Faharoa
Facts About Ayurveda sy Rice
Ny fomba hahaizana mafana amin'ny Volleyball
Miteny toy ny biby amin'ny teny espaniola
Sly & Ny Fianakaviana tsy hay hadinoina